Tsika dzeVenezuela, ndedzipi dzinonyanya kufarirwa? | Absolut Kufamba
Unoziva here tsika dzeVenezuela? Sedzimwe nyika zhinji dzeLatin America, inochengetedza yakadzika midzi yetsika nemagariro. Iyo nyika yakagadzira kuzivikanwa kwayo kubva kwakasiyana tsika dzekutama, kutanga kubva panguva yekoloni neSpanish nePutukezi.
Tsika dzese idzi, pamwe nevanozvarwa madzitateguru, vakapa chidimbu chavo kugadzira mararamiro izvo nhasi zvinozivikanwa sehunhu hunhu saka tichazoziva kuti ndedzipi dzimwe tsika dzinonyanya kukosha muVenezuela.
1 Tsika dzakakurumbira dzeVenezuela
2 Mukai nziyo
3 Cumaco kutamba
5 Kutamba madhimoni
6 Caracas zvitofu
7 Mucuchíes Mhemberero
Tsika dzakakurumbira dzeVenezuela
Takatanga nekutaura nezvazvo zuva retsika revanhu veVenzuelan iyo ine maitiro ezuva nezuva kana uchienda kubasa. Nekuda kweizvi, inoonekwa senyika yemazuva ano umo vese varume nevakadzi vanoshanda, nepo vana vachiwanzo chengetwa nemanai kana imwe hama. Mumaruwa, zvisinei, tsika yakajairwa ndeyekuti mukadzi agare pamba uye achengete zvese zvinodiwa pamba, kusanganisira kuchengeta vana.
Iye murume wechikamu chake anozvipira kuita basa uye kuwana mari yekugona kuriritira mhuri yake. Izvowo ichokwadi kuti Venzanga yeVenzuelan kukoshesa zvakanyanya tsika dzemhurikusanganisira mazano etsika nehunhu. Saizvozvo, rukudzo uye dzidzo zvakakosha kwazvo munzvimbo dzese dzenzanga.
Ichi ndicho tsika chaiyo yeVenezuela iyo ine rwiyo rwunoitwa mune dzimwe nzvimbo dzenyika. Iyo nziyo dzakamuka Izvo zvinogadzirwa nevarume nevakadzi, vakakomberedza muchinjikwa wemaruva. Kusiyana nedzimwe tsika dzakakurumbira, hapana zviridzwa zvemhando ipi neipi zvinoshandiswa pano, saka zvinongova nenziyo chete. Mhemberero yacho pachayo inonzi "Wake weMuchinjikwa".
Mune ino kesi ndeimwe ye tsika dzeVenezuela zvakajairika izvo zvinopembererwa mukuremekedza San Juan. Imhemberero yakakosha sezvo ichipembererwa mumahombekombe ese eVenezuela. Iko kutamba kunoperekedzwa nengoma uye izvo kazhinji kazhinji hazvina kurongwa.
Ndicho kutamba kwevanhu iyo yakafanana chaizvo neyechinyakare waltz iyo isu tese tinoziva, zvisinei mune iyi nyaya mukadzi ndiye anofanira kuita mamwe mafambiro anovavarira kuita kuti mumwe wake awire. Iyo ndeimwe yetsika dzeVenezuela, kunyanya yakadzika midzi mu Aragua mupata. Kazhinji, iko kutamba uko kune nzvimbo mbiri, diki iyo ndeyevaimbi nezviridzwa zvavo, pamwe neiyo hombe inoshandiswa senzvimbo yekutamba.
Chinhu chakakosha nezve izvi Tsika yeVenezuela zvine chekuita nenyaya yekuti varume vanofanirwa kupfeka nguwo chena, pamwe neheti neskafu yakasungirirwa muhuro. Vakadzi, kune kwavo chikamu, vanofanirwa kupfeka juzi juzi, rakasanganiswa neyakawandisa siketi
Kunyange chiri chokwadi icho kutamba madhimoni Ivo vane mavambo avo mu Africa, muVenezuela yakaramba yakadzika midzi mushure menguva yekoloni. Mune ino kesi, iko kupemberera kunoitika zuva rakapfuura Corpus Christi mutaundi reChuao. Iyo inowanzo ine akateedzana evatambi vanoiswa nenzira yehurongwa hwehutongi zvinoenderana nekumiririrwa kwavo: Wokutanga Kaputeni, Wechipiri Kaputeni uye Sayona. La Sayona Izvo zvinofanirwa kutaurwa, hunhu hwechikadzi hunomiririrwa nemurume anoshandisa dhiabhoni mask. Chinangwa chemudhanzi uyu kutyisidzira dhiabhori ne Ndinonamata Magnificat.
Caracas vabiki Ivo chikamu chakakosha cheVenzuelan gastronomy. Ivo vanozivikanwa semakicheni emhuri kubva uko chikafu chechinyakare cheVenezuela chinobva. Yaive mune izvi zvinhu umo Mestizo Hallaca yakabuda neSpanish, Dema uye Indian masimba.
Mutaundi re Mucuchíes Huwandu hukuru hwemhemberero dzinoitwa dzine mavambo asinganzwisisike sezvo vakagara nhaka neSpanish panguva yekukunda. Muzhinji, mitambo inozivikanwa kwazvo mudhorobha rino, inova tsika, inoitika mumwedzi waZvita, inova nguva inoitwa mhemberero dzevatsvene veguta. Kunopera kwemwedzi iwoyo, zuva raSanta Cecilia, kuwedzera kune zuva re Mhandara yaGuadalupe and the mutsvene lucia zuva. Idzi mhandara nhatu dzinokudzwa zvikuru nevagari veguta rino, zvichiita kuti ive imwe yetsika dzakadzika midzi muVenezuela.
Iyo zvakare imwe yetsika dzeVenezuela kuti mune ino kesi inoenderana ne yechinyakare fomu yekutamba nemumhanzi. Pakutanga iyi yaive mhemberero yaive nehunhu hwepati, zvisinei pamusoro pemakore zvaingova kuratidzwa kwemimhanzi nekutamba. Zvakakodzera kutaura kuti nhasi inoonekwa sechiratidzo chechiratidzo cheVenzuelan, tisingataure kuti kwayakabva kwakatangira pakati pegore 1700 apo varimi vakatanga kushandisa izwi "Joropo" panzvimbo pe "Fandango".
Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvetsika dzeVenezuela, tinokusiya iwe uine zvimwe Tsika dzeVenzuelan saka unogona kudzidza zvakawanda zvakavanzika zvetsika iyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Tsika dzeVenezuela
orlymar chacon akadaro
Pindura kune orlymar chacon
Iwe wakanganwa chakakurumbira pane zvese kusanganisira iyo yekukumbira iyo
kutaura zvakaipa nezvehurumende
Iyo Green Lighthouse, yekutanga yeDenmark 100% yezvakatipoteredza chivakwa
Geographic nzvimbo dzeColombia